Goynta | February 2020
Ugu Weyn Ee Goynta
Sida loo abuuro oo u koro Physalis
Physalis waa warshad aad u soo jiidasho leh, kuwaas oo dadka degaanka xagaaga jecel yihiin aan qabyo ahayn iyo iska caabin cayayaanka kala duwan. Qaar ka mid ah noocyada ay awoodaan soo saarida miraha waxtar leh, taas oo labalabaysa muhiimadda dhirta, sidaas darteed, waxaan ka hadli doonnaa hoosta sida loo horumariyo Physalis aaggeeda. Physalis: sharaxaadda dhirta Xitaa haddii aadan si buuxda u ogaan waxa physalis yahay, ka dibna aragtida sawirka, waxaad u maleyneysaa in aad aqoonsatay geedka this qurux badan.
Kobcinta madow Ruben on your site
Blackberry Ruben waxaa loo yaqaanaa aduunka oo idil. Sanadkii 2012-kii, waxaa la siiyay noocyo kala duwan oo ay ka mid yihiin Jaamacadda Arkansas, John Ruben Clark, oo ah borofisar ka tirsan Jaamacadda Arkansas, oo Maraykanka ka dhigtay mid aan ka mid ahayn Blackberry Ruben, laakiin sidoo kale noocyada kale ee Blackberry. Sharaxaadda Blackberry Ruben Kooxda Qallafsan ee noocyo caleenta ah, kaas oo Blackberry Ruben ahaa midkii ugu horeeyay ee soo galo, waxaa lagu kala gooyay miraha caleemaha horeba sannadkii beerashada.
Tiknooloojiyada soodhada romaine ee sii kordhaya ee dacha
Данная статья расскажет о том, почему салат ромэн стоит выращивать на своём участке. Salad Roman waxaa sidoo kale loo yaqaan salad Roman. Waa warshad sannadle ah, caleemaha kaas oo lagu ururiyey nooc nooc ah. Romain waxaa loo tixgeliyaa mid ka mid ah kuwa ugu da'da weyn caalamka, waxaa lagu daraa salad caan ah oo loo yaqaan 'Caesar'.
Xeerarka sii kordhaya kaabajka Savoy iyada oo loo marayo geedo
Nasiib darro, kaabash Savoy Cunto ma aha caan ah u bannaanka u, sababta oo ah dad badan oo u muuqdaan in ay u maleynayaan in sii kordhaya waa hawl adag oo waqti-qaadashada. Dhab ahaantii, waxaan ku sheegi doonaa maqaalkan. Calaamadaha iyo kala-duwanaanta kaabajka digo Kaabashka Savoy (Brassica oleracea convar.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Goynta 2020